Qarax Khasaaro geystay oo ka dhacay duleedka Muqdisho | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Qarax Khasaaro geystay oo ka dhacay duleedka Muqdisho
Wararka naga soo gaaraya duleedka Magalada Muqdisho ayaa waxaa ay sheegayaan in qarax lala eegtay Gaari ay wateen Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya,isla markaana qaraxaasi uu geystay khasaaro kala duwan.
Gaari nooca Soomaalida u taqaano Cabdi Bilaha ayaa lala eegtay miinada nooca dhulka lagu aaso ah xilli uu marayay agagaarka Jaamacadda Shabeelle ee deegaanka weeydoow Duleedka Magalada Muqdisho.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen laba askari oo saarnaa gaariga halka tiro kale ay ku dhaawacmeen,sida ay Risaala u sheegeen dad goobjoogayaal ahaa xilliga qaraxa uu dhacayay.
Ciidamada qaraxa lala eegtay ayaa furay rasaas farabadan taas oo aan geysan wax khasaaro ah,waxaana mudo saacado ah hakad galay isku-socodka dadka iyo gaadiidka ee deegaanka weeydoow duleedka Magaalada Muqdisho.
Inta badan Gaadiidka ay wataan Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa markii ay ku safrayaan wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo duleedkeeda waxaa lala eegtaa qaraxyada wadada dhinaceeda lagu aaso,waxaana inta badan ku waxyeelooba Shacabka wadada maraya.
Previous articleImtixaanka shaadiga ee Dowladda oo lajoojiyay.
Next articleDowladda oo sheegtay inay fashilisay weerar ay Bariire ku qaadeen Al-Shabaab